ndụmọdụ gbasara iwu | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: ndụmọdụ iwu
Isi ego nwa maka nwa nke atọ. Mentskwụ ụgwọ mgbe amụrụ nwa nke atọ
Ihe na 15.09.2019 19.09.2019
Taa, ọtụtụ ndị nne na nna nwere mmasị ka esi, nye onye, ​​yana n'ọnọdụ ole, ewepụtara isi nwa maka nwa nke atọ. N’isiokwu a, ị ga-amụta ozi niile dị mkpa. Echiche nke "isi obodo nne"? Taa ...
Atrichịghachi mba bụ gịnị? Onye nwere ikike ịlaghachi na kedu ka esi eme ya?
Ihe na 15.09.2019 20.09.2019
A na-eji okwu eji akpọghachi ndị mmadụ n'ụwa niile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na azụmaahịa. N’ime usoro dị a andaa na n’ihi nzube dị a doesaa ka nke a ji na-enwekarị? Ihe putara na “nloghachi” n’agha n’agha, “nloghachi” bu nloghachi…
Ezinaụlọ a na-atụgharị anya - gịnị ka ọ bụ? Gini bu ezi na azu na ezumike?
Ihe na 15.09.2019 21.09.2019
N'ọtụtụ ihe, taa, ọtụtụ ụmụaka na-ahapụ n'enweghị nlekọta nne na nna na ịhụnanya. Ndị ọrụ nchekwa na-eme ihe niile ka ụmụaka nwee ike nwee nchekwa. Mana onweghi onye ga eji dochie anya nne na nna.
Ọkọlọtọ nke Ireland: Akara nke North na South nke Island
Ireland bụ mba nke ọgụ siri ike maka nnwere onwe nke mba nọ na-aga kemgbe. Mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ akwụsịghị ruo taa. Ya mere, ọkọlọtọ nke Ireland na akara ndị ọzọ nwere ike ịbụ oke ...
Nkụzi na-arụ ọrụ na nchebe ọrụ. Nchebe na nchedo ọrụ
Ihe na 15.09.2019 16.09.2019
Nchedo na nchedo oru bu usoro ihe ichoro na ihe oru iji chebe ahuike na ndu ndi oru. Ọ gụnyere nwughari, ọgwụgwọ na mgbochi, iwu, nhazi, teknụzụ, usoro mmekọrịta akụ na ụba. Otu onye…
Kedu ihe ọkọlọtọ nke China yiri? Uru nke ọkọlọtọ nke China
Ihe na 15.09.2019 23.09.2019
Otu n'ime steeti kacha ochie bụ China. Ọtụtụ ihe ndị yiri ka juru ebe niile taa sitere na mba a - silk, gunpowder na akwụkwọ, dịka ọmụmaatụ. Ọ bụ ndị China, dịka ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme si kwuo, ndị bu ụzọ jiri ọkọlọtọ,…
Nrụgide bụ ... Nkọwapụta, ụdị na usoro nke mmanye mmanye
Ercgba ume bụ ụdị ọdịda, mgbe ahụ, mgbe mmadụ achọghị ime ihe ụfọdụ. Omume dị otú ahụ, nke na-amanye ndị mmadụ ka oge na-adịghị mma ma ọ bụ ọbụna na-anabataghị ha, nwere ike ...
Omume na-ezighi ezi - nke a bụ ... Site n'ihe akara aka na-ekpebi omume iwu na-akwadoghị
Ihe na 15.09.2019 07.12.2019
Omume na-ezighi ezi - ndị a bụ omume nke mmadụ, n'ihi nke a na-eme mpụ. N'okwu a, a ga-ezute otu ọnọdụ. Ya bụ: mmadụ anaghị ama ihe niile gbasara omume ya, kamakwa ọ…
Oge kachasị oke nke ike nke ọka iwu
Ihe na 15.09.2019 24.09.2019
Gini mere m ji choo ikike nke onye ọka iwu, echere m, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okenye ọ bụla maara. Nke a bụ akwụkwọ na-egosi ikike, dịka ọmụmaatụ, nke njikwa ụgbọ, ịbụ onye nnọchi anya na nzukọ dị iche iche, iji rụọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ akwụkwọ. Ndị ọzọ…
Akwụkwọ ọgwụ maka ụlọ akwụkwọ na-akwọ ụgbọala
Ndị ga-achọ ịnya ụgbọ ala n’ọhụụ ga-achọpụta ụdị enyemaka dị mkpa maka ụlọ akwụkwọ ịkwọ ụgbọala ọbụlagodi tupu ịmalite ọzụzụ. Nke a bụ akwụkwọ ọgwụ. Akwụkwọ akwụkwọ ahụike maka ụlọ akwụkwọ ọkwọ ụgbọala dị mkpa iji bido…
Ịhapụ ezumike nká ọ bụ agadi? Ụmụaka na-ahapụ na ahụmahụ na Russia
Ọmụmụ nke nwa bụ ihe omume kachasị mkpa na ndụ nwanyị ọ bụla. Y’oburu na chi n’enye gi ime, o nwere ike inwe otutu ajuju gbasara oru. Karịsịa, otu n'ime ihe ndị kasị pịa bụ isiokwu ...
Ihe 136 nke Usoro Ọrụ nke Russian Federation kwuru
Ekowara otu a si kwụrụ ndị ọrụ ụgwọ ọrụ dị iche iche na Usoro ọrụ (akọwapụtara: isiokwu 136). Ajuju a juputara na okike nke ejikọtara ọnụ. Ọrụ dịịrị onye ọrụ ahụ mkpa ọ bụghị naanị inye ndị ọrụ ya ego ...
Esi nweta obodo obodo Romania. Inweta nwa amaala Rom: akwụkwọ, ụgwọ
Ihe na 15.09.2019 17.10.2019
Paspọtụ Romania, n'ezie, bụ ezigbo ọpụpụ maka ndị chọrọ ịnọ n'otu steeti Europe. Romania, ebe ọ bụ onye otu European Union, na-enye ntinye akwụkwọ ya na-enweghị visa niile…
Atụmatụ nchebe ọkụ: Iwu Nchịkọta
Dabere na ọnụ ọgụgụ, ọkụ na-anyụ anyụ n’obodo anyị kwa nkeji ise. N’otu oge, otu onye nwụrụ n’ọkụ, ihe ruru mmadụ iri abụọ na-enweta mmerụ ahụ dị ukwuu na nkụ. Isi ihe na - akpata ọkụ bụ ...
Inwe ịkpọasị agbụrụ
N'ụbọchị ndị a, ha na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ịkpali ịkpọasị agbụrụ na ụwa na mba niile. Lọ omebe iwu nke steeti na-emezigharị na Usoro Mpụ Ha, na-abawanye ọrụ ...
Gịnị bụ usoro mpụ? Ofdị usoro ikpe ndị omekome. Ebumnuche nke usoro omempụ
Ihe na 15.09.2019 30.12.2019
Ọchịchị ọ bụla n'ụwa bụ otu ụdị nke nhazi ọha mmadụ. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ nwere mkpa mmekọrịta ọha na eze. Otu n'ime ihe bụ nchebe nke ọha mmadụ, steeti na ụmụ amaala ọ bụla ...
Democratic Republic - nke a bụ ụdị ọchịchị? Echiche na ụdị, ihe atụ na ọha mmadụ nke oge a
Ihe na 15.09.2019 02.11.2019
Ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ụdị mmepe kachasị elu nke ọha mmadụ. Mkpebi banyere afọ ojuju nke ngwaahịa na ọdịmma ndị mmadụ bụ nke onwe ha ka a na-eme. Naanị ọha mmadụ bụ naanị ụzọ ziri ezi isi nweta ike. A na-ahọpụta ndi ndu site na…
Ihe ngbaba nke kpatara na iwu iwu
Dabere na iwu nke Russian Federation, ịtọlite ​​mmekọrịta dị oke mkpa bụ nyocha nke mpụ. Ọ bụ njikọ dị n'etiti ihe omume ma ọ bụ ọnọdụ ụfọdụ na nsonaazụ ikpeazụ nke omume na-ezighi ezi ma ọ bụ enweghị ọrụ. Yabụ ...
I rere ụlọ na-erughị 3 afọ nke ịnweta. Zụ na ire ụlọ. Ire nke ulo
Dị ka ị maara, ego sitere na ire nke ụlọ site na ndị mmadụ n'otu n'otu na-edo onwe ya n'okpuru ụtụ ego onwe onye - ụtụ ego onwe onye. Mgbe ịzụrụ ma na-ere ụlọ na Russian Federation, n'ọnọdụ niile a na-akwụ ndị Russia ...
Na-arụ ọrụ na FSB: otu ị ga - esi dozie ya?
Ihe na 15.09.2019 25.09.2019
FSB, dị ka nzukọ nke na-arụ ọrụ ọgụgụ isi na ọrụ ọgụgụ isi, yana ịlụso mpụ na iyi ọha egwu, adịla afọ iri na asatọ. Ndi buru ya ụzọ ama - ndi Cheka, ndi NKVD, ndi KGB, site na ya ma…
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,522.